(Last Nohavaozina: 03/09/2021)
stroopwafel dia iray amin'ireo zava-mamy indrindra eo an-toerana iray mampiankin-doha Afaka mahita any Eoropa. Tsy toy ny zava-mamy hafa maro, tsy misy adihevitra momba izay avy Ny Fomba Ahitana sady misy. Mpanao mofo tao an-tanànan'i Zavatra Gouda voalohany dia nahary azy ho. Noho izy ireo entana sy mandeha tsara, manao fahatsiarovana tena tsara.
Cuberdon no iray amin'ireo tsara indrindra sy mazava indrindra ao an-toerana any Eoropa zava-mamy. Izany dia miendrika satroka, volomparasy matetika, ary nofenoina famenoana voaroy. Rehefa manaikitra ao anatin'ny anankiray, ny nify malefaka Ampidironareo ao amin'ny famenoana afovoany mora foana. Matetika izy ireo no miantso azy io hoe Belzika tsiambaratelo nafenina tsara indrindra. Satria sarotra ny hiarovana izany rehefa afaka herinandro vitsivitsy, tsy manondrana izany matetika izy ireo. Na izany aza, ho an'ny mpizaha tany izay te hanandrana zavatra tsy manam-paharoa, ary ento mody, ny cuberdon tanteraka.
Fiaran-dalamby Britain, Train Travel China, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Greece, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel Russia, Fiaran-dalamby Spain, Train Travel UK, Travel Europe